BEE: Vaka Uye Dhawunirodha Yako Nhare mbozha Inopindura Email Pamhepo Mahara | Martech Zone
BEE: Vaka Uye Dhawunirodha Yako Nhare Inopindura Email Pamhepo Mahara
Muvhuro, March 8, 2021 Chipiri, August 17, 2021 Douglas Karr
Vanopfuura makumi matanhatu muzana emaemail ese anovhurwa pane mbozhanhare maererano neConstant Contact. Zvinotyisa kushamisika kuti mamwe makambani achiri kunetseka nekuvaka kunze kunoteerera maemail. Pane zvitatu zvinonetsa neinoteerera email:
Email Service Provider - Vazhinji vanopa maemail havasati vaita kudhonza & kudonhedza kugona kweemail, saka zvinoda toni yekusimudzira pane yako agency kana timu yemukati yekuvandudza kuvaka iwo matemplate.
Email Vatengi - Havasi vese vatengi veemail vakafanana uye vazhinji vacho vanopa maemail akasiyana nevamwe. Nekuda kweizvozvo, kuyedza kune emaimeri vatengi uye zvishandiso indasitiri mukati uye yega.
budiriro - Kana iwe uchiziva HTML neCSS, unogona kuvaka yakanaka inotapira peji rewebhu zviri nyore ... asi kuvaka musiyano kune yega email mutengi kunogona kunge kuri kwehusiku. Zvinoda kushanda nevakuru vanogadzira, kana kushanda pamwe neakaedzwa kwazvo uye akashandurwa matemplate.
Ikozvino kune zvakawanda nzvimbo nzvimbo online kwaunogona kuwana uye kurodha emahara email matemplate ayo anoteerera zvizere. Kana iwe uri wakanaka pakukura, iwe unogona kazhinji kuchinjisa kunze zvinhu uye kuzvivakira iwe wakanaka email. Kugadziridza kodhi mbichana kuseri kweemail hakusi kunakidza, hazvo… kanganwa sitayera kana kirasi uye email yako inotaridzika.
Ndanga ndichida kuti ndigadzirise tsamba iyi Martech Zone kwekanguva ikozvino uye isu tine yedu chaiyo email sevhisi inomhanya pane yedu pachedu server iyo inodhura masendi padhora richienzaniswa nevamwe vanopa. Kune vanyoreri vanopfuura makumi matatu, ini handikwanisi kupembedza mari yevakawanda vanopa email saka takavaka zvedu!
BEE Nhare Yakapindura Email Inovaka
Pandakaongorora mamwe matemplate akatenderedza webhu ayo andaida, zvakaitika kune BEE, kambani yakagadzira mashoma mashoma turu zvishandiso:
BEE Plugin - yakanyatsogadziriswa email peji mupepeti kumakambani eSawaS kuti vaise mumapuratifomu avo.
BEE Pro - email dhizaini yekufambiswa kwehunyanzvi email vagadziri kuti vashande pamwe nekukudziridza pane.
IVA NEMAHARA - inoshamisa yemahara-inoteerera anovaka email anovaka iyo iwe yaunogona kugadzira matemplate kubva kutanga kana kuendesa chero imwe yemazana emahara anopindura email matemplate.
Tarisa uone Email yeBEE uye Landing Peji Rinovaka
Mukati meawa, ndakakwanisa kuvaka email yangu, kuibatirira nharembozha, kuzvitumira bvunzo, uye kurodha pasi kodhi ... zvese mahara!
Kutanga, ndakasarudza template isina chinhu ndokuvaka zvikamu zvandaida uye ndikashandisa mifananidzo yekuchengetedza. Ini ndichave ndichinyora izvi mu Martech Zone's template kana iri iko chaiko kwandinoda iko.
Ini ndakazotarisa email kune desktop uye ndakaita zvimwe zvidiki zvigadziriso zvekusiyana uye padding.
Ndakafanoona muMobile uye ndakaita imwezve shanduko. Mupepeti anopa mukana wekuvanza zvinhu zve desktop kana nhare, kuti ugone kunyatso shandura ruzivo rwe nhare zvakanaka.
Ini ndakazozvitumira iyo email yakananga kubva kuBEE's Edhita:
Mupepeti zvakare anoita kuti iwe uve neakajeka mamiriro anotaridzika kunge akanaka kana uri kushandisa Rima Mamiriro pane yako email nemhosva.
Pane imwe nguva zvese zvaive zvakakwana, ini ndakakwanisa kurodha pasi yakazara HTML faira uye chero mifananidzo yemagariro yaive yakaverengerwa neiyi interface. Vane sarudzo shoma panguva ino, zvakadaro, kana iwe ukasaina kubhadharira BEE Pro account.
BEE uri kutsvaga tsamba yekuvandudza kubva Martech Zone!
Kutanga Kuvaka Yako Inopindura Email neBEE
Kuzivisa: Ndiri kushandisa yedu BEE yakabatana chinongedzo munyaya ino.
Tags: nyuchi email mupepetinyuchi pluginnyuchi proemail mupepetiyemahara email mupepetionline email mupepetiinopindura email mupepeti